शेरधन राई पदमुक्त हुदै, को बन्दैछ नयाँ मुख्यमन्त्री ? « TopStar Khabar
शेरधन राई पदमुक्त हुदै, को बन्दैछ नयाँ मुख्यमन्त्री ?
२०७८ भाद्र ४ गते शुक्रवार प्रकाशित
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट माधवकुमार नेपाल समूह छुट्टिएपछि १ नम्बर प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री शेरधन राई संकटमा परेका छन् ।
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले सांसद संख्याका आधारमा बहुमत पुर्‍याउन सक्ने सम्भावना देखिएको छैन ।
प्रदेश सरकार ढल्ने निश्चित बनेसँगै प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्रीको खोजी सुरू भएको छ ।
स्रोतका अनुसार लामो समयसम्मको पार्टी विवादसँगै नेपालले दर्ता गरेको नयाँ दल नेकपा एमाले समाजवादीको पक्षमा एमालेका १५ सांसद देखिएका छन् । उनीहरुले नयाँ दल रोज्दा प्रदेश सरकार ढल्ने निश्चित बनेको बताइएको छ ।
यसअघि १९ जना सांसद नेपालको पक्षमा रहेको दावी गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री राईका प्रेस सल्लाहकार ध्रुव सुवेदीले अहिले नै सरकार परिवर्तनको अनावश्यक हल्ला चलाइएको बताएका छन् ।
‘नयाँ दल दर्ता भएपछि २१ दिनसम्म सांसदले पार्टी रोज्न पाउँछन्,’ सुवेदीले भने, ‘त्यतिबेला मात्रै अहिलेको सरकार रहने वा नरहने भन्ने यकिन हुन्छ ।’
पार्टी नै विभाजन भइसकेपछि प्रदेश सरकार अब नरहने एमाले समाजवादीका नेता एवं प्रदेश सांसद राजेन्द्र राईले बताएका छन् । उनले भने, ‘केही समय लागे पनि अहिलेको सरकार ढालेर नयाँ गठबन्धन सरकार बनाउँछौं ।’ १ नम्बर प्रदेशमा नेपालले नेतृत्व गरेको एमाले समाजवादीले नै सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने सम्भावना रहेको छ ।
त्यसो हुँदा राजेन्द्र राई नै मुख्यमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित छ । यसअघि नेपाललाई साथ दिँदै आएका भीम आचार्य मुख्यमन्त्रीका दाबेदार थिए । उनले नेपालको साथ छोडेपछि नयाँ गठबन्धन सरकारको नेतृत्वका लागि राई दाबेदार बनेका छन् । ओली पक्षले विभाजनको पक्षमा उभिएका आचार्यलाई नै अब मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गर्ने सम्भावना रहे पनि उनैले नमानिरहेको स्रोतले बताएको छ ।
पूर्व सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे पनि मुख्यमन्त्रीको लाइनमा रहेका थिए । केही दिनभित्रै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विश्वासको मत लिनुपर्ने नभए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउने बताउँछन् राजेन्द्र राई ।
स्रोतका अनुसार एमाले समाजवादी पनि भीम आचार्यलाई आफूतिर तानेर मुख्यमन्त्री बनाउने प्रयत्नमा रहेको छ ।
एमाले समाजवादीले नेतृत्व नपाए नयाँ सरकारमा कांग्रेसलाई फाइदा हुनेछ । कांग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था आए पार्टी संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला मुख्यमन्त्री बन्नेछन् तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले समाजवादीको नेतृत्व गरेका माधवकुमार नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको सहमतिअनुसार एमाले समाजवादीले नै १ नम्बर प्रदेशमा नयाँ बन्ने सरकारको नेतृत्व पाउने सम्भावना रहेको स्रोतले बताएको छ ।
स्रोतका अनुसार उनीहरुबीच सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा माओवादी, बाग्मतीमा कांग्रेस र १ नम्बर प्रदेशमा एमाले समाजवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति यसअघि नै भइसकेको थियो । एमाले समाजवादीका नेता राईले पनि आफ्नै दलले सरकारको नेतृत्व पाउने बताए ।
माओवादीका एक नेताले १ नम्बर प्रदेश १ मा आफ्नो पार्टीले सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी नगर्ने बताएका छन् । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता हिक्मतकुमार कार्कीले पार्टी एकताका लागि सबै विकल्प खुला गर्दै अघि बढिने बताएका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
काबुल विमानस्थाल क्षेत्रमा हालसम्म कम्तीमा ३०जना मारिए
रक्सी पसलबाट विभिन्न किसिमको लागूऔषध बरामद
यिनै हुन् जसले आज अकालमै ज्या’ न गुमाउनु पर्यो, ओतका लागि रेनकोटको सहारा लिएका सुमनको रेनकोटले नै लियो ज्या’ न
नेपालमा बढी भएकाे बिजुली अन्तरदेशीय बजारमा बेच्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ : कुलमान घिसिङ
हाँस्य कलाकार शम्भुराज थापाको पाटन अस्पतालमा निधन